CNC Yakagadziriswa Borated Polyethylene Zvikamu Zvinoenderana NeKudhirowa
tsika saizi ukobvu uye borin zvemukati nekurema hunowanikwa yakakwira density uhmwpe borated polyethylene jira re neutron kudzivirirwa
Borated Polyethylene chigadzirwa chakanyatsogadzirirwa neutron radiation kudzivirira ne3% kusvika 50% boron nekurema uye yakakwira hydrogen zvemukati. Inoitwa kuzadzisa ese anoshanda mafomu ehutano hwekurapa gomarara nzvimbo dzekuongorora, zvipatara uye zvipatara zvipatara. Zvikumbiro zvinosanganisira mitsara yekumhanyisa, nyukireya kana radiation kudzivirira, kushandiswa kwemaindasitiri, chengetedzo senge zviteshi zvengarava uye kuchengetedzeka kunhandare yendege, zvombo zvenyukireya, magineti emagetsi, kuchengetedzwa kwemuganhu uye zvimwe zvinoshandiswa zvinoda kudzikiswa kwemautron.
- maGrade: 1%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30% boron nehuremu huripo, iyo yakawanda boron yezvinhu, zvirinani kupisa kwe radiation.
1) -Replace inotungamira mukushandisa kwenyukireya kudzivirira.
2) -Iye nyore kubata uye kugadzira kune akasiyana maumbirwo uye zvikamu.
3) -Superior yekumusoro kugadzikana pamusoro pehupamhi tembiricha renji.
4) -High hydrogen zvemukati uye yakawedzera boron.
5) -Churema uremu uye yakaderera mutengo kupfuura lead.
Yedu Borated polyethylene jira inouya mune dzakasiyana siyana makobvu, saizi, akacheka-kusvika-saizi mitsetse, mabhuroko, mamaki, uye mavara. Iva neHMWPE pepa rakatemwa uye rakagadzirwa muzvikamu zvakagadzirwa zvekushandisa kwako.
Yakakwenenzverwa polyethylene uhmwpe pepa
Saizi tsika-yekucheka kana kucheka-ku-saizi; kureba 7.3m, max upamhi 2m, ukobvu unosvika ku250mm Kurudzira: 6000mm x 1500mm; 3100mm x 1250mm; 4000mm x 2000mm; 3050mm X 1220mm, 4000mm X 1500mm, 2440 X 1220mm.
Boron Zvemukati 3% - 50%, populare vakaita se5%, 8%, 12%, 20%
Ruvara Dema yakajairwa
Dhirivhari Yakachengetwa UHMWPE jira rinowanzoendesa mumazuva 2-5 ebhizinesi
Kushanda lNyukireya reactorslNyukireya warshipslPersonnel uye nhumbi kuona michina
lCance kurapwa zvivakwa
lNzvimbo dzesimba renyukireya
Kwese kupi kwenyukireya kana radiation radiation inodiwa
Q1: Iwe uri mugadziri here?
A1: Hongu, tanga tiri mukupa zvigadzirwa zvehunyanzvi
Q2: Inoenderana here inowanika?
A2: Ehe, zvinoenderana nemadhirowa ako akazara aunopa.
Q3: Sei kubhadhara?
A3: Via Paypal, T / T kubhadhara, Trade Assurance uye kumwe kubhadhara. Nezve iyo yekubhadhara ruzivo ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu. Ndatenda!
Q4: Unogona kupa mharidzo?
A4: Hongu, tinogona kukupa mahara mashoma masampuli, asi mweya mutengo uchabhadharwa nevatengi.
Q5: Mazuva mangani masampuli achapedzwa? Uye zvakadii nekugadzirwa kwakawanda?
A5: Kazhinji iwo masampuli anozotumirwa nekukurumidza nemhepo expression mumazuva 3-5 kana zvinhu zvirimo. Kazhinji mukati me30days kana zvinoenderana neyako odha.
Pashure: CNC Yakagadziriswa Borated Polyethylene Zvikamu
Zvadaro: Yakakwira Density Polyethylene (HDPE) Mapepa
10% Borated Hdpe Sheet
10% Borocic Hdpe Sheet
10% Boron Yakawedzerwa Hdpe Sheet
10% Boron Iine Hdpe Sheet
10% Boron Yakazadzwa Hdpe Sheet
12% Borocic Hdpe Sheet
12% Boron Yakawedzera Hdpe Sheet
12% Boron Iine Hdpe Sheet
12% Boron Yakazadzwa Hdpe Sheet
20% Yakabatwa Hdpe Sheet
20% Boron Yakazadzwa Hdpe Sheet
4% Yakakwenenzverwa Hdpe Sheet
4% Borocic Hdpe Sheet
4% Boron Yakawedzera Hdpe Sheet
4% Boron Iine Hdpe Sheet
4% Boron Yakazadzwa Hdpe Sheet
5% Yakabatwa Hdpe Sheet
5% Borocic Hdpe Sheet
5% Boron Yakawedzera Hdpe Sheet
5% Boron Iine Hdpe Sheet
5% Boron Yakazadzwa Hdpe Sheet
8% Yakakwenenzverwa Hdpe Sheet
8% Borocic Hdpe Sheet
8% Boron Yakawedzera Hdpe Sheet
8% Boron Iine Hdpe Sheet
8% Boron Yakazadzwa Hdpe Sheet
Boron Yakawedzera Hdpe Sheet
Boron Iine Hdpe Sheet
Boron Yakazadzwa Hdpe Sheet
Yechinguva Road Mat